IIBHARI ZASEKHAYA EZINGAMA-39 (IINGCAMANGO ZOYILO KUNYE NEMIFANEKISO) - IINGCAMANGO ZEGUMBI LOKUPHILA
Eyona Iingcamango Zegumbi Lokuphila Iibhari zasekhaya ezingama-39 (Iingcamango zoyilo kunye neMifanekiso)
Le galari inezinto zokuhombisa zasekhaya ezinemibono yoyilo kunye nemifanekiso. Ibha yasekhaya yesiqhelo inokuba yeyona ndawo iphambili yokuphumla emva kosuku olunzima emsebenzini okanye uphumle nje nabahlobo kwaye wonwabe. Nazi iindawo ezingama-37 zemivalo yasekhaya eqinisekileyo ukuba iyakonwabisa kwaye ikunike uninzi lweembono kunye nenkuthazo yokudala indawo yakho yokuphumla ukonwabele nabahlobo kunye nosapho.
Iklasi kunye nobuhle zizinto eziphambili eziphambili kule ndawo yangaphakathi. Izixhobo zokukhanyisa zisebenza ngenjongo ephindwe kabini njengomthombo osebenzayo wokukhanya okwaneleyo kunye neziqwenga ezinomdla. Izibane zejometri ezijingayo zihamba ngokuhambelana nomxholo wemigca kunye neefom ezomeleleyo ezisetyenziswe kwisithuba. Udonga lwesccesces lunceda ukubiyela ibar yokubala yemarble esebenza kwisiqwenga sendawo yokuphumla. Abamnyama kunye negraya zefanitshala zenza umahluko olungileyo kulo lonke igumbi kwaye imigangatho ekhaphethiweyo kunye neetafile zeglasi kunye nezentsimbi zigcina igumbi likhanya kwaye lilinganiswe ngokufanelekileyo.
Iingcamango zoYilo lweKhaya laseKhaya
Ukulungiswa phantse okungahleliwe kweethayile zetan travertine kubonakala ngathi kunika ubomi kumgangatho wendawo. Iindonga zeAccent zifakwe kulungelelwaniso lwamatye, kodwa ngokwahluka okongeziweyo kubume kunye nombala. Ikhabhathi emnyama yamaplanga, iishelfu, kunye nefenitshala zisebenza njengomahluko olungileyo wokuthambisa ukukhanya kwendawo. Ubumbeko oluntsonkothileyo lwezingwevu zesilingi eziwe phantsi lubonakala ngathi lubeka iindawo ezahlukeneyo zesithuba.
Umzekelo woyilo olungqindilili nolula, esi sithuba sisebenzisa ubume bemibala emdaka nomhlophe ukunceda ukuqhuba indawo yaso ekhaya. Iibhodi zeplanga ezenziwe ngomthi, ikhabethe, ifenitshala, kunye noncedo oluphezulu lwekhawuntari zinika ubushushu obamkelekileyo kwindawo. Imibala emnyama, etyebileyo yezi mpawu yahluke kamnandi ngombala omdaka, okhanyayo weendonga nophahla.
Ibha yasekhaya yesiqhelo isebenzisa phantsi kwesibane sokukhanyisa kunye nefuthe elinamandla ukwenza i-vibe epholileyo. Imibala eyahlukeneyo inokusetyenziselwa ukutshintsha izinto ngokuxhomekeke kwimeko yakho.
Izinto zokudlala ezinemibala eqaqambileyo yokudlala izitulo zebar zomthi zinika umbala ongalindelekanga kumbala kwisithuba. Ukusetyenziswa ngokwesiko okuthandwayo kweenkuni eziphosiweyo kumphezulu wekhawuntari lukhetho loyilo olunezinto ezininzi ezifanelekileyo zobuhle. Ukucwangciswa ngononophelo kweziqwenga zokubonisa ezishelifini zebar kuyinxalenye yokuziva ngokubanzi kwebar yasekhaya. Umbala omnyama webha umi phakathi kweendonga ze-beige kunye neebhodi zomgangatho. Inkqubo ye- Umgangatho ongaphantsi Iquka iiplanga zemithi zemveli zommandla webar kunye ne-laminate yendawo esezantsi yekhitshi.
Esi sithuba sisebenzisa umxube othandekayo emehlweni wemibala eqaqambileyo. Iifestile ezibanzi ngokufanelekileyo zivumela ukukhanya okuninzi ukubonisa umbala wombala wegumbi. Ubumdaka besilingi etyheli, ukumnyama okumnyama kwendawo yebar kunye neendonga, kunye nokusetyenziswa okungafaniyo kwekhaphethi eluhlaza kudala indibaniselwano yombala eyonwabisayo kwaye inomdla. Iipateni ezimbejembeje kwizitulo zomthi eziphakanyisiweyo, iipateni ezintsonkothileyo kwikhaphethi, kunye nezibane zeentyatyambo ezisetyenziswa kwisilingi efulelwe ngamaplanga ziya kongeza kwiindawo ezahlukeneyo ezinomtsalane.
Uyilo lwebar lubonakala ngokucacileyo ukuba lwaluyilelwe umxholo-wobusuku obupholileyo nobushushu. Ibha yokukhanya eblowu ekhanyayo iyahambelana nobunzulu besibhakabhaka sakuhlwa kwangoko. Ukusetyenziswa ngesibindi kwezitena zomthi ezomeleleyo eziqingqiweyo, iibhodi zeti ezenziwe ngomthi, kunye neeplanga zomthi teak ezindongeni nasesilingini, kunceda ukugxilisa umbala oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nevista ebonwe kumnyango omkhulu omise ngaphandle.
Ubuncinci babusetyenziswa kwiifom kunye neenkcukacha zoyilo lwebar yekhaya. Kugcina ukuziva kulula kwaye kukhululekile ukubakho. Iincopho zamatye zokubala kunye neethayile zodonga ezimhlophe nezimhlophe zihamba kakuhle nekhabhathi emnyama engwevu kunye namashalofu. Imigangatho yeplanga kunye nophahla olupeyintwe ngwevu lenziwe lenza ukuba isithuba sijongwe ngokubonakalayo kwaye silungelelaniswe ngobuhle, kubalulekile ekwenzeni indawo ibonakale ngathi yeyekhaya.
Ukuqaqanjelwa kwesi siqwenga yimarble emnyama esetyenziswe kwikhawuntala ephezulu nakwibha. Izinto ezincedisayo kuyilo olungqongqo lwezitulo zebar, izitolimende zobugcisa, kunye nezixhobo zebar ezibonisiweyo. Udonga lwangasemva lwamaplanga olumnyama lukwenze umahluko olungileyo kunye nophahla olumhlophe olucocekileyo, udonga kunye nemigangatho.
Izitulo zebar ezimhlophe zesikhumba zidibanisa kakuhle nomphezulu weemarble ongwevu. Iigrey kunye ne-browns zekhaphethi, umgangatho, kunye nodonga lwezitena zongeza indawo elungileyo eyomeleleyo kwisithuba. Elona qhekeza linomdla loyilo zizinto zalo zekhandlela zekhandlela ngaphezulu kwebar; iya kubonisa ukuba ukukhanya kwenza okungaphezulu nje kokukhanyisa indawo.
Olu luyilo lwalenzelwe iimeko zabucala ngakumbi. Indawo yokuhlala, efana nale isetyenzisiweyo kuyilo, ibonelela ngendawo yokuhlala kwigumbi elincinci kunye neetafile zebar setyhula zenza ubuhle obusondeleyo nobonwabisayo. Ukusetyenziswa okukuko kwezibane ezihonjisiweyo kuzongeza kumtsalane wendawo yonke. Ukubekwa kwefestile kuthintela indawo ukuba ingaziva. I-granite emnyama isetyenziselwa ii-countertops kwaye uncede ukunika le bar yangokwesiko isitayela esilungileyo nesiphucukileyo.
Umzekelo woyilo lwanamhlanje, oluncinci, le bar yekhaya isebenzisa isibindi, imigca ecacileyo kunye nemiphetho ukwenza indawo yokuthandeka okugqibeleleyo. Imibala yebhloko emnyama emnyama, engwevu, kunye nomhlophe nayo yongeza umoya wayo wokuhlelwa. Izitulo zebar yesikhumba, umphezulu womthi oqinileyo kunye nezibane ezilula kodwa ezinesitayile zizinto zonke ezikhethiweyo zoyilo ezikunceda le bar yekhaya encinci ukuba iphumelele ngokupheleleyo. I-mosaic tile yangoku i-backsplash inceda ukubeka indawo yendawo yokubonisa utywala obubizayo kwaye ugcine izixhobo zakho zokuxuba kwindawo elula ukufikelela kuyo.
Uyilo lwangoku lwebar esezantsi ekhaya lubonisa indawo ekuthiwa yi-peninsula countertop enezihlalo zeglasi kunye nezibane ezikhanyayo. Ibha ngokwayo ixhotyiswe ngeekhabhathi ezimnyama ezineminyango yeglasi efrijiweyo nekhabhathi ephezulu ifriji encinci kunye nesinki.
Uyilo lwezitulo zebar kunye nemibala ye-eccentric yezibane ezihonjisiweyo zisebenza njengezona zinto ziphambili zoyilo. Amanqwanqwa amatye e-quartz amhlophe aqinileyo kunye nomsebenzi wekhabhathi wokhuni unceda ukukhanyisa ukujonga okupheleleyo kwegumbi. Isinyithi emva kokutshiza iithayile ezisetyenziswa kwindawo esinki zongeza enye ikhephu lomtsalane wangoku.
Olu luyilo lubanzi ngumzekelo olungileyo wokuyilwa kweklasikhi okudityanisiweyo kule mihla. Ukusuka kwizitulo zebar eziphakanyisiweyo ezenziwe ngobunkunkqele ukuya kumthi oqingqwe ngobunono kwindawo yomlilo, ukusetyenziswa ngobunono kweenkuni kunye nokusebenza ngomgangatho kunika indawo yeklasi kunye nesitayile. Iifestile ezinkulu zeglasi ziqinisekisa ukuba indawo ivulekile kwaye ikhanya ngelixa indawo yokubasa umlilo ibekwe kwicala eliphambi kwebar phezulu kwindawo entle yoyilo. Isilingi ephezulu ene-coffered ibonelela ngemvakalelo yokunethezeka kunye nobuhle kwigumbi.
Iindonga zezitena zisetyenziselwa ukongeza ubushushu kwindawo kwaye lo mzekelo webar yasekhaya ngumzekelo ophambili weendonga zezitena ezisetyenziswe ngokufanelekileyo. Ukusetyenziswa ngokukuko kwemithi etyebileyo, ikhaphethi, kunye nezibane zokukhanyisa kwimizi-mveliso zigcina indawo iziva irustic kwaye ikhululekile. Ukusetyenziswa okunomdla kwesakhelo somthi kungabonwa kwisithuba - njengesakhelo sethelevishini esineflethi. Lo ngumzekelo olungileyo wokuyila, ngaphandle kwebhokisi.
Isilingi zihlala zixatyiswa kakhulu kuyilo lwangaphakathi. Nangona kunjalo, ngeendlela ezininzi, uyilo lwesilingi lunokwenza okanye lwaphule igumbi. Kulo mzekelo, izitena zazisetyenziswa njengesigqubuthelo sophahla. Oku kongeza i-ambiance esondeleyo kwindawo kunye nokubonisa ubukrelekrele ekusebenziseni kwayo izinto zokwakha. Oku, kudityaniswa neencopho zamatye ezimnyama, ikhabhathi emnyama eyenziwe ngomthi, kunye neethayile zomgangatho wamatye agudisiweyo, nika le bar yeklasi kunye nesitayile.
Igumbi elinye linokusebenzela ngaphezulu kwenye injongo endlwini. Le bar yekhaya yakhelwe ngokwendalo kwi igumbi lemidlalo yasekhaya . Ulungiselelo olufana nolu ngumzekelo woyilo oludibeneyo oludibanisa iindawo ezimbini ezahlukeneyo-kule meko, ibha yekhaya kunye neqonga lasekhaya-ukwenza indawo eyahlukileyo nephefumlelweyo.
Iwindows ebanzi, enje ngale isetyenzisiweyo kule bar yasekhaya, yenza ukuba izithuba zivakale zibanzi kwaye zamkelekile. Bayamema ukukhanya kwelanga kwigumbi kwaye, kudityaniswe nodonga olufudumeleyo olungwevu, iithayile zelitye ezibuyela umva kunye neentsika zokulwa, izitena ezikwikholamu, kunye nezitulo zebala yesikhumba, le ndawo yenza uzive usekhaya.
Umbala yinto yonke ekuyileni isithuba. Le bar yekhaya isebenzisa iindonga zayo ezibomvu ezinamachaphaza kunye nodonga olumhlophe olusisiseko ukuzinika ubuhle obukhethekileyo kunye nesitayile. Iphethini eluhlaza kunye nebomvu amalengalenga aqhubela phambili ukuphilisa indawo. Imigangatho eqinileyo yomthi oqaqambileyo kunye nomphezulu weplanga kunye nezitulo zebar zinika uyilo imvakalelo efudumeleyo, yokwamkela.
Imibala kunye nezinto eziphathekayo ayizizo kuphela izinto ezinokudlala ngokujikeleza ngokuchaseneyo; Iimpawu zinokusetyenziselwa ukuchaza indawo. Imiphezulu egudileyo ethe tyaba yeendonga ezimhlophe, imigangatho yeplanga, isitala samatye kunye nezitulo zebha zithelekiswa kamnandi nokubonakala kwelitye elirhabaxa kodonga lwangasemva kwebar.
Le bar yekhaya idityaniswe kwindawo ephambili yokuhlala ekhaya. Olu hlobo loyilo, xa lwenziwe ngokuchanekileyo, luphucula kakhulu imeko yelikhaya. Umphezulu wamatye, iindonga ezimhlophe ezimhlophe, iithayile zelitye lekalika, kunye nefenitshala emnandi, zonke zikhutshwe kukukhanya okumhlophe okushushu, zenza le ndawo ibe yindawo efudumeleyo kodwa enesitayile ukonwabisa.
Njengempahla, iglasi yaziwa ngobuhle bayo kunye nobunkunkqele. Kwaye xa isetyenziswe ngengqondo, yenza iindawo ezizodwa nezintle. Ibha yasekhaya ngumzekelo wokusetyenziswa okunjalo. Ukulungiswa kwemizi-mveliso kunye nefenitshala edityaniswe nefestile yokubonisa iglasi yokuqokelelwa kwewayini yomninikhaya kuyenza ibhar yasekhaya eyenza inqaku lokubonisa ubungqongqo bayo ngokunyanisekileyo nangobuhle. Ikhabhinethi eneengcango zeglasi ezenziwe ngefestile, ifestile emhlophe eyenziwe ngefestile ekupheleni kwebar, kunye nezibane zeglasi zokukhanyisa ukukhanya zikhanyisa indawo ngakumbi.
Izithuba ezipholileyo zikhupha iimvakalelo zeklasi kunye nobuhle. Le bar yolwandle kunye negumbi lokuphumla libonisa isibheno esipholileyo, esizolileyo solwandle kunye neengcango zalo ezinkulu zeglasi ezibonisa umbono wolwandle ngaphandle. Isithuba sisebenzisa imibala epholileyo engwevu nemnyama kwiimpawu zayo-iindonga ezimnyama, imigangatho engwevu, kunye nekhawuntari yamatye emnyama-esebenza ngokuhlangeneyo. Umzobo onencasa oxhonywe kudonga lwayo oluphambili kunye nezihlalo zesikhumba ezinesitayile kukuchukumisa okuhle kokugqibela kubuhle bayo.
Ukungqinelani kwezixhobo kunye nemibala zihlala zikhetha ukhetho olugqityiweyo, kodwa kukho ukufaneleka kokophula ukungaguquguquki kuyilo. Kolu luyilo, imigangatho yeplanga ineenkozo zomthi kunye neepateni zobukhulu obahlukeneyo obudibanisa kakuhle nokukhethwa kweefenitshala zebar ye-mosaic. Ukhetho lwezinto zokuhombisa longeza ubungakanani beshishini okwangoku ekhaya.
Esi sithuba sisebenzise ikhawuntari ngokusisebenzisa ukophula ubude bebar. Kumakhaya, ubukhulu beendawo zibaluleke kakhulu; Ikhawuntari ijolise ngokungafaniyo kubunzulu begumbi kwaye ibekwe embindini owaphula indawo kwaye uyithintele ekuziva ivulekile kakhulu. Imigangatho emnyama yeplanga, isitulo esimdaka ngebala lesikhumba, ikhawuntala yeemarbled, kunye nekhabhathi etyebileyo emdaka zonke zinegalelo kubudlelwane bendawo.
Iibhari zihlala zibekwe kumagumbi apho isilingi ingaphakamanga kakhulu; Nangona kunjalo, lo mzekelo ungqina ukuba uyilo alunamida. Isilingi esezantsi yakhiwa ngaphezulu kwendawo yebar ukuze kuthintelwe uphahla lwendlu oluphezulu ngokungaqhelekanga. Iinkcukacha zoyilo lwendawo - isetyhula ye-neo-classical ikholamu ebambe isilingi esezantsi kunye neenkcukacha ezintsonkothileyo eziqingqiweyo kwikhawuntara yeplanga lebar kunye nokubumba-kugqiba i-rustic, phantse i-vibe yeMeditera yendawo.
Ubomvu obuqaqambileyo yimibala etsala uninzi lwengqwalaselo kwigumbi. Kulo mzekelo, iisofa kunye nezitulo zokuphumla zisebenza njengendawo ekugxilwe kuyo kwigumbi elinombala obomvu krwe. Elinye igumbi ligcwalisa ngokufanelekileyo ifanitshala ngeetoni zomhlaba, ukutyibilika kwamatye, udonga lwamatye kunye nokuhonjiswa okumangalisayo kwenza indawo entle esithubeni. Ilitye eliqokelelweyo le-bar yasekhaya lenza indawo efanelekileyo yokuncoma indawo yokubasa umlilo kunye ne-travertine flooring.
Indawo yokugcina ingasetyenziselwa kuphela ukusebenza kodwa kunye nobuhle; Njengakolu loyilo, abaphathi beebhotile zewayini ezihombisa phantse lonke udonga lwasemva lisebenza njengobuhle obunomdla. Ingxoxo yomngxuma otshisiweyo ubekwe ngokufanelekileyo ecaleni kwekhawuntari kwaye indawo yokubasa umlilo yenza isitayile sasekhaya saseMeditera esaziwa ngakumbi ngamatye kunye nezitena ezisetyenziswe phantsi nasezindongeni.
Ibha yasekhaya yanamhlanje esebenzisa iziqwenga zangoku ezinemibala egqamile ukuhombisa indawo yayo. Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka olinganisiweyo ubomvu oqaqambileyo wezitulo zokuphumla. Ngobude obude obuphezulu obugobileyo obuphezulu, esi sithuba siziva sicocekile, sinesitayile, kwaye sikulungele ukuba phakathi. Kuyathakazelisa ukuqaphela ukuba ukuphakama okungafunekiyo okuphezulu kwebar counter top kusebenza ngokugqibeleleyo nezitulo ezibomvu zokuphumla zesikhumba ezisetyenziswa njengebha ilindle.
Imivalo yasekhaya yesiqhelo ihlala yenza ingxelo enkulu kwaye le ayisiyiyo eyahlukileyo. Le bar yekhaya imnyama nemfusa inexabiso elinomtsalane lomtsalane kunye nesitayile. Ngeefom zayo ezichanekileyo nezicacileyo, ukusetyenziswa okuninzi kwezinto zensimbi ezingenasici, kunye nokusetyenziswa okucocekileyo kwepeyinti emnyama ngeendonga ezimfusa kunye nezitulo zebar ezimfusa, ikamva lebar yasekhaya lisuswa kukusetyenziswa kwesiqithi sebar esembindini .
Ibha encinci yasekhaya ebukekayo esebenzisa indawo yayo ngengqondo yegolide, emhlophe, kunye nomnyama ukuze ubambe umdla wakho. I-jet emnyama yamatye aphezulu kunye neekomityi zegolide kunye neglasi zacwangciswa ngobunono kwishelufa yangasemva kwesibini esinebhegi kakuhle ngokukhetha ifanitshala enemigca ye-tiger eyongeza umda wobuntu basendle kwisithuba. Ipeyinti enefreyimu eqhubekayo iyaqhubeka nemvakalelo yedrama kunye nobuhle kweli gumbi.
Esi sithuba sebar yasekhaya sisebenzisa i-roll up yeglasi-uhlobo lomnyango ukuvula ngaphakathi ngaphakathi kumhlaba ongaphandle. Ukusetyenziswa komgangatho wamatye owaphukileyo kunye neendonga zezitena kuyagxininisa ekunyibilikeni phakathi ngaphakathi nangaphandle. Ukuyikhupha yonke le nto, ukusetyenziswa ngobuchule kwezitulo zebar zomthi nezesikhumba ezimnyama, itafile esecaleni yesitayile somzi mveliso, kunye netafile yamatye emdaka emnyama yenza ukuhlangana okuhle kwezinto kunye nemibala kwisithuba.
Esi siko sasekhaya se-rustic bar sisebenzisa ngokufanelekileyo iiplanga zomthi njengezilingi kunye neendonga zokunceda ukwenza i-vibe ngokufana nokuba senqanaweni ehamba elwandle. Olu luyilo lusebenzisa nje oko kudityaniswe nemithi eqinileyo yokujikeleza izitulo zebar, ukusetyenziswa okuninzi kwamatye ezindongeni nasemgangathweni, kunye noyilo olukhanyayo lokukhanyisa olubonisa ngandlela zonke ezi zinto.
Ukusetyenziswa ngononophelo kokukhanya yenye yeempawu eziphambili zesithuba. Kulo mzekelo, ukusetyenziswa kweefestile ezininzi zeglasi kunceda ukwenza indawo etyebileyo ngobomi kunye nokukhanya. Ukusetyenziswa kwamatye emgangathweni kunye nekholamu esembindini kuhamba ngokugqwesileyo kunye nokusetyenziswa kokucoceka okuphantse kufane nokuluhlaza okwekhonkrithi ezindongeni nakwisilingi. Inqaku elikwafanele ukuphawulwa kukusetyenziswa kwesitayile kwezibane zependenti zommandla wendawo yokubala kunye netafile yeephuli. Ngokubanzi, uyilo lukuvumela ukuba uzive ngathi ubekwelinye igumbi elipholileyo, elimnandi ehlathini.
Ukuqhuma okudlulileyo: uyilo oluphefumlelweyo luka-Victorian lusebenzisa amanqaku aqhelekileyo kwiindawo ezinkulu, eziklasikhi emva kweentsuku. Isiphatho esincinci kodwa esincinci, izihlalo ezenziwe ngomthi ezihonjiswe ngesikhumba esigqwesileyo, iipateni ezikroliweyo ezikhawuntarini kunye nezinto ezibunjiweyo, kunye nezinto zobugcisa - umzobo onencasa oxhonywe eludongeni kunye neebhasi eziqingqiweyo ezikwindonga yangasemva kwebar- yenza indawo enesitayile esiqhelekileyo kwaye esingaphelelwa lixesha.
Oku kukhanya kunye nesitayile uyilo lwegumbi lokuhlala elinobunewunewu ngefreyimu yetropiki ibonisa ibha yasekhaya eneshelfu yeglasi kunye nekhabhathi yeenkuni ukubonelela ngobuninzi bokugcinwa kweebhotile kunye nezinto zeglasi. Ibha ibuyisela umva kwindawo yodonga lwendonga kwaye inoyilo lwesipili ngasemva kweshelfu yokunceda ukwandisa ukukhanya kunye nokongeza ubunzulu kwisithuba. Umthombo: IPalm Springs Estate
Kwizithuba ezinde, ukusetyenziswa kweempawu zoyilo ezahlula isithuba kubaluleke ngakumbi. Le bar ibisebenzisa amacandelo ahlukaniswe eludongeni kunye nokubeka eludongeni ngasemva kwayo ukwenza lula ubude bayo. Iithayile zamatye, ikhabethe yokhuni, iincopho zamatye, kunye nemiqadi yeplanga yenza indawo eyamkelekileyo, eqaqambileyo, kwaye etofotofo. Ikhabinethi etyebileyo yeenkuni yale bar yesiko lekhaya ibonisa umgangatho wobugcisa bokusebenza kwayo kunye nokuqwalaselwa kweenkcukacha.
Nanku omnye umzekelo webha ebekwe kwindawo yokuhlala ephambili yendlu. Imivalo yasekhaya ebekwe kufutshane nomnyango wendlu isebenza ngenjongo yesibini yokuba bubuso bendlu; kolu luyilo, ipateni yobuxoki yesitena sodonga lwangasemva kwe-bar yenza umoya wemfihlakalo kunye nomtsalane we-rustic uqhubekeka kuphela ngokusetyenziswa kwesango elihonjisiweyo elihlala lisetyenziswa ngaphandle ngesibane esiqaqambileyo sangemva kwemivalo yaso.
Ngamanye amaxesha, uyilo lwemivalo yasekhaya alukhanyisi ngokwenyani ngaphandle kweempawu olunazo kodwa kukuvuleka kunye nomoya ongathandekiyo. Uyilo olulula kodwa olungenakuphikiswa luhlala kwindawo elula yokuhlalisa abantu ezimbini kunye netafile yeephuli enebhodi yomgangatho weplanga yeplanga kunye neendonga ezenziwe ngepeyinti. Eyona nto ibalulekileyo kwesi sithuba sophahla lwentsimbi olujikeleziweyo kunye nokuhonjiswa; Ukulula kwesithuba kusebenza njengendawo yangasemva egqibeleleyo yoyilo olunomdla. Ngakumbi izimvo zebar yasekhaya Ndwendwela eli phepha legalari.
ubopha njani iqhina elibhityileyo
iinwele zomtshato zeenwele ezinde
ilizwe lomtshato ingoma yokuqala yomdaniso
eyona ndawo yokuthenga iithoyi zesini
iingoma zomama nonyana
Iikhikhini zelizwe elimhlophe